उमेर अनुसार गर्नुपर्छ यस्तो स्वास्थ्य परीक्षण !! | सुदुरपश्चिम खबर
उमेर अनुसार गर्नुपर्छ यस्तो स्वास्थ्य परीक्षण !!
हामीकहाँ नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने प्रवृत्ति पाइदैन । अस्पताल वा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच सहज नभएका कारण पनि धेरैले रोग पालेर बसेका छन् । कुनै न कुनै शारीरिक समस्याबाट गुज्रिरहेका छन् । गंभिर रोग लागिसकेपछि मात्र अस्पताल धाउने गरिन्छ ।
यदि भर्खरै जन्मिएको बच्चाको शारीरिक तथा मानसिक स्तर सही छ ÷छैन भन्ने कुरा जान्नका लागि थाइराइड टेस्ट गर्नुपर्छ । यदि बच्चा पूर्ण रुपले स्वस्थ्य छ भने, उसको कुनै मेडिकल टेस्ट गर्नु आवश्यक छैन ।
जब बच्चा २ बर्षको हुन्छ, केहि किसिमको खानेकुरा खान थाल्छन् । खानपानकै कारण पेटमा जुका पर्न सक्छ । वा ब्याक्टेरिया पर्न सक्छ । यदि उक्त उमेर समूहमा बच्चाको पेटमा ब्याक्टेरिया छ–छैन भन्ने जान्नका लागि स्टूल टेस्ट गर्न सकिन्छ ।
बच्चाको उचाई, मोटाइ, तौल समुचित ढंगले बढिरहेको छ कि छैन ? यसबारे जान्नुपर्ने हुन्छ । बच्चाको आ“खा, दा“तको स्वस्थ्यबारे पनि जान्नुपर्छ । यदि त्यसो हो भने सामान्य मेडिकल चेकअप गर्न सकिन्छ । यसले बच्चाको मानसिक तथा शारीरिक अवस्था सही छ÷छैन भन्ने जानकारी लिन सकिन्छ ।
यस उमेरमा बच्चाको नियमित चेकअप गराउन सकिन्छ । त्यसबाट उनीहरुमा कुनै गडबडी छ–छैन भन्ने जान्न सकिन्छ ।
यो उमेरमा पनि कतिपय शारीरिक समस्या देखापर्न सक्छ । खासगरी महिलाको मासिक श्रावलाई लिएर समस्या हुनसक्छ । उनीहरुमा मासिक श्राव सही समयमा भइरहेको छ–छैन भन्ने जान्का लागि पिसिओडी टेस्ट गराउनुपर्छ । यदि गर्भ रहेमा ब्लड सुगर, थाइराइड, युरिन टेस्ट, थैलिसिमिया, हेमोग्लोबिन र एचआइभी टेस्ट गर्न सकिन्छ ।
५० बर्ष पार गरेपछि केहि दीर्घ रोगले सताउन सक्छ । मधुमेह, उच्च रक्तचाप, कोलोस्टोर, दम जस्ता समस्याहरु देखापर्न सक्छ । त्यसैले नियमित रुपमा यस्ता रोगहरुको परीक्षण गराउनुपर्छ । ५० बर्षपछि शारीरिक शिथिलता पनि बढ्ने भएकाले प्राणायाम, योगलाई बढी महत्व दिनुपर्छ । अनलाइनखबर बाट सभार